ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင့်အိပ်မက်ရဲ့အချင်းမိန်းမဆွဲဆောင်ဖို့ Action အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 27 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
သင့်အဘို့အကောင်းသတင်းရှိပါသည်. အကယ်. တူညီသောခံစားရသောသူတဦးတည်းသာမဟုတ်,. နာမည်ကျော်စကားကိုဝင်အဖြစ်
“အမျိုးသမီးများဝင်္ကကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, သင်သည်ထိုသူတို့နားလည်လျှင်, သင်တို့သည်လောကီကိုနားလည်ဖို့”.
အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အလိုရှိသမျှအထက်တန်းကျောင်းနှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်သူတွေကို lanky နှင့်မလိုလားအပ်သောယောက်ျားတွေတဦးဖြစ်ပါပြီ. ငါသည်အအမျိုးသမီးများနှင့်ကျော်ကြားဖြစ်အဘယ်သို့ပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်မသိခဲ့ပါ.
ယနေ့တွင်, ကျနော်ဇနီးတစ်ဦးရှိသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးသမီးရက်စွဲပါပါပြီ. အမျိုးသမီးများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနှင့်အတူငါ့အတွေ့အကြုံအရငါ့ကိုအအမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်၏အနုပညာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်စေကြပြီ. စဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. သင့်ကိုကူညီနိုင်သည့်ဤအကြံပြုချက်များထဲမှအချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်.
သူတို့အပေါ်မှာပဲမူတည်နိုင်ပါသည်လူကဲ့သို့အမျိုးသမီးများ. ထိုသို့, အမြဲမိန်းမများသင်တို့သည်အားကြီးသောနှင့်အားကိုးဖြစ်ကြောင်းသိရန်ရရှိရန်သေချာစေရန်ကြိုးစား. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချီးမွမ်းခြင်း၏တစ်နည်းနည်းလည်းအမျိုးသမီးကိုဆွဲဆောင်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်.
သင်သည်သူမကြည့်လမ်းအပေါ်ရှိသူမ၏ချီးမွမ်းနိုင်ပါသည်, သူမသာသွားလာနည်းလမ်းပေါ်မှာ, ဆွေးနွေးပွဲ, ဆင်မြန်းသို့မဟုတ်အပြုံးများ. အခြေခံအားဖြင့်တော့, သင်နှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ချီးမွမ်းဘာမှသူမ၏ပျော်ရွှင်စေလို.
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအများကြီးလုံးဝသူမ၏အတွင်းစိတ်အလှအပအကြောင်းကိုချီးမွမ်းကိုချစ်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်သူတို့ရဲ့ပျော့ပျောင်းနှင့်မေတ္တာရှင်သဘောသဘာဝအပေါ်အမျိုးသမီး complimenting ကြိုးစားနိုင်ပါ, နှလုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြားအရာများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရ.
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားတစ်ဦးကအခြေခံပညာခြားနားချက်ဖြစ်သည်, ယောက်ျားတစ်ဦးပြဿနာအကြောင်းသင့်ပြောပြသည့်အခါ, သူတို့သည်သင့်ဖြစ်နိုင်ချေဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူတက် လာ. ဖို့မျှော်လင့်.
သို့သော်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြဿနာအကြောင်းသင့်ပြောပြသည့်အခါ, သူတို့့သင်ပြဿနာကိုနားထောင်ချင်ပြီးသူနှင့်အတူ sulk.
အမျိုးသမီးများပြဿနာများဖြေရှင်းနည်းကိုများနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝစိတ်မဝင်စားရှိသည်. ထို့ကြောင့်, သင်ရုံကောင်းတစ်နားထောင်သူဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ပြောရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုသင့်ရဲ့နားကိုထုတ်ချေးခြင်းဖြင့်အလွန်စိတ်သူတို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်. ထိုသူတို့ကိုသင်သည်အမှန်တကယ်သူတို့နှင့် ပတ်သက်. ကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တွေးထင်သွားစေပါလိမ့်မယ်.
လက်ဆောင်များမိန်းမများအများဆုံးပျော်ရွှင်စေ. အမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းအရေးကြီးဆုံးအဖြေတစ်ခုမှာသူတို့ကိုတိုင်းဖြစ်နိုင်အခါသမယမှာလက်ဆောင်တွေပေးဖို့ဖြစ်တယ်. အမျိုးသမီး၏အဆိုအရ, ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ကဲ့သို့လွယ်ကူသည့်အခါသမယကျင်းပခဲ့ရရန်လိုအပ်သည်.
ထိုကွောငျ့, သင်သည်ဖြစ်ရပ်များ၏အသေးငယ်ဆုံးအဘို့အရက်စွဲများကိုသင်တို့အားသတိပေးတဲ့ဒိုင်ယာရီကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပြုပါသည်. ချက်ချင်းသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ထိုဖြစ်ရပ်များ၏အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်နှစ်ပတ်လည်ဂုဏ်ပြုရန်မိန်းမတို့ကိုလက်ဆောင်တွေပေးပါ.
5. chivalrous Be:
Chivalry အဓိကအားဖြင့်အားလုံးကျော်အမျိုးသမီးများကတန်ဖိုး. သင်သည်မိန်းမအဘို့ကားကိုတံခါးဝကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်သူမရဲ့ဆွဲဆောင်ဖို့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ထိုင်မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းတူ chivalry ၏ငယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမမေ့မလြော့ပါကြောင်းသေချာပါစေ. သူမသို့မဟုတ်သူမ၏ရှေ့မည်သည့်အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာကြွေးကြော်ကြဘယ်တော့မှမ. ဒါဟာသင် woo ချင်တဲ့မိန်းမဟာအလွန်ခိုင်မာစွဲမှတ်ရှိသည်ငှါသင့်ကိုကူညီပေးပါမည်.
အမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်တစ်ဦးကနိဂုံးချုပ်စ​​ိတ်ကူးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြမ်းကိုပြသရန်ဖြစ်သည်. ခိုင်နှင့်ယောက်ျားစိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့ like နှိပ်အမျိုးသမီးများမှာဒဏ္ဍာရီများမှာ.
မိန်းမတိုင်းပခုံးပေါ်မှာအော်ဟစ်မည်သူတစ်ဦးသည်လူ likes. ထိုကွောငျ့, နောက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်, သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုခြမ်းသူမ၏ပြသ.
ရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်များမှသူမ၏ ယူ., ဖယောင်းတိုင်အလင်းညစာစားပွဲ. အဲဒီအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကြိုးစားခဲ့လူအပေါင်းတို့နှင့်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသော်လည်းအများအပြားရက်စွဲများကိုရပြီ.
သို့သော်, wooing နှင့်ဆွဲဆောင်အမျိုးသမီးများ၏နည်းလမ်းများအခြားမိန်းမတယောက်ကမှကွဲပြားခြားနား. သင့်လျော်သောအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအကြှနျုပျကိုဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုကောင်းမွန်စွာသင်ကူညီလမ်းညွှန်လိုကထပ်မံမေးခွန်းများမေးရန်အခမဲ့ခံစားရ.
ထို့နောက်မှ, Luck ၏အကောင်းဆုံး!